जेडटीईको फ्ल्यागशिप G जी स्मार्टफोन फेब्रुअरी २ on मा डेब्यु हुनेछ: यो एक्सन १० प्रो हुनेछ Androidsis
ZTE यसको MWC घटनामा स्मार्टफोनको ब्लेड श्रृंखला मुक्त गर्नका लागि परिचित छ। पछिल्लो वर्ष, घोषणा स्मार्टफोन ब्लेड V9 र ब्लेड V9 Vita। पछिल्लो महिना, ब्लेड V10 TENAA मा पूर्ण चश्मा संग देखियो। तसर्थ, यो अनुमान गरिएको छ कि ब्लेड V10 ब्लेड V10 Vita सँगै MWC २०१ at मा निकाल्न सकिन्छ।
यद्यपि, कम्पनीको मुख्य घोषणा यसको पहिलो 5G प्रमुख फोन हो। कुनै विवरणहरू फोनका विशेषणहरूमा उपलब्ध छैनन्। यस्तो सम्भावना छ कि यसले चिपसेटको साथ काम गर्न सक्दछ Snapdragon 855 र तपाईंको X50 LTE मोडेमले समर्थन गर्न सक्दछ 5G जडान.
पछिल्लो महिनाको अन्त्यमा, एक स्मार्टफोन, लेबल गरिएको ZTE A2020 प्रो, Geekbench बेन्च मार्किंग प्लेटफर्ममा पत्ता लागेको थियो। फोनको लागि Geekbench सूचीबद्ध स्नैपड्रैगन 855 855 को उपस्थितिको पुष्टि गर्दैन। यद्यपि, एकल कोर र बहु-कोर परीक्षणहरू SDXNUMX द्वारा उत्पन्न गरेको जस्तै समान थिए, जसले उही समान चिपले उपकरणलाई उर्जा दिन सक्छ भन्ने सुझाव दिन्छ।
यसको पहिलो G जी स्मार्टफोनको डेब्यूको लागि ZTE निमन्त्रणा
रहस्यमय ZTE A2020 प्रो टर्मिनल अर्को स्मार्टफोन हुन सक्छ एक्सन १० प्रो यो नै उपनाम यूरेशियाई आर्थिक आयोग (EEC) डेटाबेसमा पनि देखिएको छ, जसले उपकरण युरोपमा जानेछ भनेर संकेत गर्दै। फोनमा दुई रूपहरुमा आउने सम्भावना छ, जस्तैa5G समर्थन बिना नियमित मोडल र अन्य 5G जडानको साथ सक्षम गरिएको.
यो अफवाह छ कि जेडटीईको पहिलो arrive जी फोन आइपुग्नेछ, पहिलो उदाहरणमा २०१ Europe को पहिलो आधा युरोप र चीनमा। यद्यपि हामीले कुनै पनि नवीनता सामना गर्न उच्च प्रदर्शन मोबाइलको आधिकारिकरणको लागि धैर्यता र निश्चितताको साथ कुर्नु पर्छ। भविष्यवाणी र अनुमान गरिएको छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » हाम्रो बारेमा » जेडटीईको फ्ल्यागशिप G जी स्मार्टफोन फेब्रुअरी २ on मा डेब्यू गर्न: यो एक्सन १० प्रो हुनेछ